जहाँ महिला सधैं त्रासमा बाच्न विवश छन्
अष्ट्रेलियाको उत्तरी मुलुक पपूवा न्यूगिनी संसारकै महिला हिंसा हुने देशमा पर्दछ । यो देश महिलाहरूका लागि संसारमै खतरा मानिन्छ । एक अध्ययन अनुसार त्यहाँ ७० प्रतिशत महिला आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै महिला हिंसा एवम् यौन हिंसाको शिकार भएकै हुन्छन् ।
बिबिसीका अनुसार पपूवा न्यूगिनीको राजधानी पोर्ट मोरस्बीमा यस्ता मानिससँग भेट भयो जो महिलाहिंसालाई सामान्य रुपमा लिन्छन् र हिंसामा कुनै गल्ती समेत देख्दैनन् । यात्राका क्रममा यस्तो भन्ने महिलासँग पनि भेट भयो, ‘अति भो अब यो कुरा छोडनुहोस् ।’ बलात्कार र हिंसाका यति धेरै घटना हुँदा पनि आरोपीमाथि खासै कारबाही भएको देखिदैन । यो ठूलो चिन्ताको विषय हो ।
एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीका अनुसार जनवरी २०१८ देखि अहिलेसम्म बलात्कारका मात्र ६ हजार घटना दर्ता भएका छन् । उनी भन्छन,‘यी त दर्ता घटना मात्र हुन,यसबाहेकका घटनाको त लेखाजोखा नै छैन ।’ पपूवा न्यूगिनीमा बदमाशहरूलाई ‘रास्कल’ भन्ने गरिन्छ । बलात्कारको सबैभन्दा बढी आरोप यिनी व्यक्तिहरूलाई लगाउने गरिन्छ । महिलाको सामूहिक बलात्कारमा पनि यही समूह सहभागी हुने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ ।
उनीहरू विरुद्ध न सर्वसाधरणले किटानी उजूरी दिन हिम्मत गर्छन न त ती समूहहरू प्रहरी देखि नै डराउँछन । एक ‘रास्कल’ले बिबिसीलाई भने,‘यहाँ महिला सबैभन्दा धेरै पिडाको शिकार भएका छन्,उनीहरूलाई लुटनु,पिटनु,सडकमा कुनै महिलामाथि अभद्र व्यवहार गर्नु सामान्य जस्तै छ,कसैले त्यसको विरोध गर्दैनन् ।’
पपूवा न्युगिनीको राजधानी पोर्ट मोरेस्बीमा तपाई एउटा महिलालाई गहन रुपले नियाल्नु हुन्छ भने उनको अनुहारबाट थाहा हुन्छ कि उनी कुनै न कुनै खतरामा छिन् । राजधानी शहरमै महिलाहरूको यस्तो अवस्था भएपनि सरकारले केही गर्न सकेको छैन । शहरमै ‘सेफ हाउस’ थप्नुपर्ने अवस्था छ । एक सेफ हाउसमा बस्ने सुजैनले हिम्मत साथ भनिन्,‘ श्रीमानले मलाई असाध्यै पिटथे,बच्चरोले मेरो हात काटदा ३५ ओटा टाँका लगाउनु पर्यो ।’ उनको सन् २००० हजारमा विवाह भएको थियो १८ वर्षको हिंसा खेपेर उनी सेफ हाउसमा बस्न आएकी हुन् । उनी ६९ वर्षकी थिइन् ।
सेफ हाउस संस्कृति
मैरिसाले सेफ हाउसमा बस्नका लागि शरण मागिन् तर उनको उमेर तोकिए भन्दा कम भएकाले सेफ हाउसको हाकिमलाई राख्न नसकिने भन्दै फिर्ता पठाए । मौरिसा भन्छिन्,‘सेक्स गर्न नदिएको भन्दै उसले मलाई खुब पिट्थ्यो । कहिले वेल्टले हान्थ्यो,कहिले चक्कु रोप्थ्यो ।’उनले भनिन,‘पापीले आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गर्यो,तर पनि परिवार र प्रहरीले मलाई सहयोग गरेनन् ।’
५ वर्ष अघि न्यूगिनी सरकारले परिवार सुरक्षा कानुन बनाएको थियो । यस कानूनले घरेलुहिंसालाई अपराध मानेको छ र त्यस्तो कार्य गर्नेलाई २ वर्षसम्म जेल हुने व्यवस्था गरिएको छ,आरोपीलाई २ हजार अमेरिकी डलर जरिवाना पनि तोकेको छ । यस्तो कानुनले जैनेट जस्ता महिलाहरूलाई निकै राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
उनी भन्छिन्,‘मैले आफ्नो बच्चा छोडेर हिडनु पर्यो,यहाँ हिंसाका घटना दर्ता गराउने प्रचलन नै छैन,म प्रहरीको सहयोगले आफ्नो बच्चा लिन चाहन्थे ।’ तर,सर्बसाधारणलाई कस्ले न्याय दिने ? यहाँको पितृसत्ताले महिलाको चित्कार सुन्दैन । यसबारे पुरुषहरूको राय के छ ? जैनट का पति भन्छन्,‘म एउटा कर्मचारी हुँ,विद्यालयमा पढाउँछु,म किन महिला हिंसा गर्छु,एक दिन जैनेटल मलाई थप्पड हनिन् त्यसपछि मैले उनलाई एक मुक्का हानेँ ।’ पत्नी कि रवैया ठिक होइन । जैनेटका श्रीमान भन्छन्‘खराब रवैयाका मतलब उनी मेरो कुरा सुन्दिनन्,बच्चालाई दुःध समेत खुवाउदिनन् ।’ यसको केही समयपछि जैनटका पतिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । उनलाई आफ्नो बच्चासँग भेट गराइयो । परिवारको रोहवरमा जैनटले आरोप फिर्ता लिएपछि उनका पति पनि छुटे ।
यसैक्रममा बिबिसीका प्रतिनिधिले राजधानी पोर्ट मोरेस्बीको सबैभन्दा ठूलो जेलको पनि अवलोकन गरेका थिए । यहाँ वयस्क र नाबालग कैदीलाई भिन्दाभिन्दै राखिने रहेछ । २७ जनाको ग्रुपमा १२ केटाहरू बलात्कारका आरोपी थिए । रेप गर्ने अभियुक्तहरू १३ वर्षका थिए ।
जेलमा ३९ वर्षीय कैदी रूबेन पनि भेटिए । उनलाई १० वर्षकी बालिका रेप गरेको अभियोग लागेको थियो । खुलेर त्यसदिन भएको घटना बारे उनले भने,‘उ त्यसदिन मेरै घरमा आएकी थिइ,मैले कुनै हतियार देखाएर जवरजस्ती गरेको होइन,यसमा उनलाई कुनै पछुतो पनि छैन ।’ प्रहरीका अनुसार बलात्कारमा पपूवा न्युगिनीमा वढीमा ५ बर्ष कैद हुने प्रावधान छ र नाबालगका लागि भने यस्तो सजाय २ वर्ष तोकिएको छ । बिबिसी हिन्दी अनलाइनबाट
प्रकाशित १६ आश्विन २0७५ , मङ्गलबार | 2018-10-02 12:38:52